Maraykanka oo ka hadlay Duqeyn ka dhacday Sh. Hoose - Ceelhuur Online
Home > Wararka Maanta > Maraykanka oo ka hadlay Duqeyn ka dhacday Sh. Hoose
Maraykanka oo ka hadlay Duqeyn ka dhacday Sh. Hoose
July 31, 2017 admin481
Warsaxaafadeed uu soo saaray taliska ciidamada Maraykanka ee Qaaradda Afrika ee Africa Command ayaa lagu sheegay in 29-kii bishan July ay Mareykanka Soomaaliya ka fuliyeen howl-gal lagu dilay xubin ka tirsanaa Al-shabaab.
“Wasaaradda Gaashaandhigga ee Maraykanka, ka dib markii ay heshay warar lagu hawl-gali karo iyo sirdoon sax ah, waxay qaadday weerar guuleystay, kaas oo ay ku dishay hal mintid oo ka tirsanaa ururka Al-Shabab.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Warsaxaafadeedka ayaa lagu sheegay in wax dhibaato ah ayna dadka shicibka ah kasoo gaarin weerarkan.
Warsaxaafadeedka waxa lagu xusay in hawlgalku uu ka dhacay meel u dhow deegaanka Tooratoorow ee koonfurta Soomaaliya.
Warsaxafadeedku waxa kale oo uu sheegay in weerarka la qaaday ka dib markii iskaashi lala sameeyey xulufada gobolka, iyada oo lagaga hortagayo falalka Al-Shabab oo ay ku jiraan weerarada uu ururkaasi dhawaan ku qaaday ciidanka Soomaaliya.
“Waan sii wadaynaa wada shaqeynta aan la leenahay Soomaalida iyo xulufadeena si aan u burburino Al-Shabaab, isla markaana aan kaalin uga geysano deganaanshaha iyo amniga gobolka oo dhan.” Ayaa lagu yiri qoraalka.
Kulamada Aqalka Sare ee Baarlamaanka oo Ajande la’aan u qabsoomi la’
Cali Jabal oo lagu dilay Weerarkii Toratorow
Maxkamadda Ciidamada oo Dil ku xukuntay Askari horay u dilay Darawal
RW Khayre oo kulan gaara la qaatay António Guterres
September 24, 2017 Cali Yare